‘एक वर्षभित्र आउँदैछ विराटनगरमा रेल’ - विवेचना
‘एक वर्षभित्र आउँदैछ विराटनगरमा रेल’
May 16, 2018 223 Views
विराटनगर, जेठ २ । विराटनगरमा रेल आउने हल्लासँगै धेरैको मनमा यस्ता प्रश्न खेल्न थालेका छन् । के साँच्चै आउँला रेल ? कि यो हल्ला पनि सपनामै सीमित हुने हो ? तर, एक वर्षभित्रै विराटनगरबासीले रेल कुदेको हेर्न पाउने भएका छन् ।
प्रारम्भिक चरणमा मालबहाक रेल आउनेछ । नेपालतर्फको तीन किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भएको छ । सन् २०१९ मार्चसम्ममा विराटनगरमा रेल ल्याउने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले बथनाहा कटहरी रेल्वे परियोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा र्पुयाएको छ । अहिले नेपालतर्फ धमाधम लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ । ३७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८.६ किलोमिटर रहेको छ । निर्माण कम्पनीका मेनेजर डाइरेक्टर प्रदिप कुमारले आगामी अक्टोबरसम्म नेपालको सीमासम्ममा रेल आउने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालमा जग्गाको समस्या समाधान भए आउँदो मार्चसम्ममा कटहरीसम्म रेल कुदेको तपाईंहरुले हेर्न पाउनुहुनेछ ।’ उनका अनुसार नेपालमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकीछेउमा भने आगामी अक्टोबरसम्म रेल आउनेछ । उक्त स्थानमा अहिले धमाधम रेल स्टेशन निर्माण भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार बथनाहादेखि एकदुई दिनपछि रेलको लिक बिछ्याउने काम सुरु हुँदैछ । बीचको रेल्वे लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरेको छ ।
गत मार्च मसान्तसम्ममा आयोजनाको रकममध्ये २१३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ भने ६० करोड बराबरको काम कटहरी स्टेशनको जग्गा विवादले रोकिएको छ । जग्गा विवाद समाधान हुनेबित्तिकै उक्त रकम खर्च गर्ने क्रम सुरु हुनेछ । भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये तीन किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
‘जिल्ला अदालतले जग्गा धनीले दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ, त्यसको पुनरावलोकनका लागि भन्दै सरकारले पुन: उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ’, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘अदालतको फैसला नआउँदा मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान हुन सकेन, जसले गर्दा काम रोकिएको हो ।’ सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको मागलाई जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएको थियो ।
अदालतको उक्त फैसलापछि केही जग्गा धनीले अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या बढेको हो । ‘१५/१६ जना जग्गा धनीले अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधानका लागि भारतका प्रतिनिधि, रेल्वे लाइन निर्माण कम्पनी, नेपाल पक्ष र जग्गाधनीसँग छलफल गरेर छिट्टै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ, अदालतले ढिलो फैसला गर्दा काम केही ढिलो हुन गएको छ ।’ जिल्ला अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाको सुनुवाइ छिटो भइदिए आयोजनाको काम छिट्टै सम्पन्न हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सन् २०११ जनवरी २८ देखि सुरु भएको आयोजना लामो समयसम्म मुआब्जा विवादमा गुज्रिएको छ । सन् २०१३ डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्नेगरी भारतीय निर्माण कम्पनी इर्कनले ठेक्का लिएको सो काम विभिन्न अड्चन र ढिलासुस्तीले सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामग्री कलकत्ता बन्दरगाहबाट विराटनगर नाकासम्म भारत सरकारले मालबाहक रेल ल्याउन भारतले भर्खरै मात्र अनुमति दिन दिएको हो । तर जोगबनीमा कन्टेनर राख्ने ठाउँ नभएकाले कलकत्ताबाट रेलले ढुवानी गरेको सामग्री अहिले बथनाहासम्म मात्रै ल्याउन सकिन्छ ।
Previous स्थापना दिवसमा आँखा परीक्षण
Next खाद्य समस्या घटाऔँ
August 16, 2017 92,957